Sezvazviri mumbeu yerotasi ramangwana rakashongedzerwa, saizvozvo muchimiro chemunhu rudzi rwakakwana rwevanhu rwakavanzika. Rudzi urwu runofanirwa kuve nemimba yekufungidzira, ipapo kuburikidza nemutumbi wemhandara yakazvarwa. Mumwe nemumwe akazvarwa anova Muponesi wenyika uyo anoponesa kubva mukusaziva nerufu.
Izvo zvakanzi zvekare: iro izwi rarasika: rave nyama. Nekusimudza kweMuponesi izwi rakarasika rinowanikwa.
Vol. 1 SEPTEMBER, 1905. Nha. 12
YEMAHARA zvinhu hazvingagone kuvapo kuburikidza neyakagadzirirwa mamiriro ezvinhu munzvimbo dzakarongeka mudenga pasina musimboti wekugadzira kana Fomu.
Pasina nheyo yefomu yakapusa nyaya ingadai isina kubatanidzwa uye kukudziridzwa kuita yekongiri fomu. Pasina musimboti wekuumbwa kwezvinhu zvepasi, nezvezvirimwa, uye mhuka, hazvigone kuenderera zvakadaro. Pasina musimboti wekuumbwa kwezvinhu zvepasi, nezvezvirimwa, uye mhuka, zvaizopesana uye kudzokera mune iyo nzvimbo yakakwirira iyo yavakabva. Nechimiro chinhu chinoshandisirwa mashandisiro, uye chinofambira mberi kubva kuumambo kuenda kune humwe ushe kubudikidza nenzira Simba rese inyaya, uye zvinhu zvese zvine simba, simba uye zvinhu kuva izvo zviviri zvinopesana zvechinhu chimwe chete pane chero ndege yekuita. Iwo mweya pamusoro ndege yepamusoro inova chinhu mundege yedu, uye nyaya yendege yedu ichava mweya zvakare. Kubva pazvinhu zvidiki zvepakutanga, kuburikidza nenyika yedu nekumberi, kune huchenjeri hweMweya, zvese zvinoumbwa nenyaya nemweya, - kana “simba” sevamwe vanosarudza kudaidza mweya - asi pane marongero manomwe echiito chavo. Isu tinorarama pane zvekunyama, zvakaderera pane pohunhu, asi kwete munzvimbo yekusimudzira.
Chimiro musimboti chakakosha pane chero ndege yekuita uye, sekureva musimboti, fomu inoshanda pane yega yega manomwe ehurongwa. Kune mafomu ekufema, ayo anoshandiswa nemusoro kuita kupinda kwawo kwekutanga muhupenyu hwezvinhu; mararamiro-maficha, ayo gungwa guru rehupenyu rinoshandisa kuendesa simba raro kuburikidza nenyika yakaratidzwa; astral mafomu, ayo anoshandiswa seyakatarisana kana nzvimbo yekusongana kune ese mauto uye mafomu ayo, sepasevhiri remota, pfungwa dzinoshanda; zvepanyama zvepanyama-mafomu, ayo anoshandiswa seyakaenzana kana vhiri vhiri iro iro pfungwa rinodzidza chakavanzika chekugutsikana, kusava noudyire, uye mubatanidzwa; zvishuwo-mafomu, ayo anoshanda kutsanangura, kuona, uye kuendesa zvido zvinoenderana nekusika kwavo kwakasikwa mumhuka yemhuka; mafungiro, -akashongedzerwa nemuvezi, vependi, uye nevamwe maartist - anoratidzira chimiro chendangariro, anoratidza zvinangwa zvevanhu, uye anoshanda sessaiti kana mbeu zvichienderana nenzira iyo hunhu hutsva hwakavakwa; munhu-fomu, ichi ndicho chimiro kana kuti ego rinopfuurira kubva kuhupenyu kuenda kuhupenyu, rinotakura pane huwandu hwakazara hwekusimudzira. Kana iyo fomu-yega yapedza kutenderera kwayo haife muchimiro kuburikidza nemazera uye inoda kubuda zvakare. Isati yakwana, zvisinei, chimiro chayo chinofanirwa kuchinja. Kune mafomu akakodzera kudarika ekumbokwira chiyero, kunyange zvisingaite zvakanaka kufungidzira nezvavo.
Muviri wemuviri wemunhu unoratidzika kunge wechigarire, asi isu tinoziva kuti izvo izvo zvakagadzirwa zvinogara zvichiraswa, uye kuti zvimwe zvinhu zvinofanirwa kushandiswa kutsiva marara emarara. Ganda, nyama, ropa, mafuta, mapfupa, marunda, uye simba rechisimba, rinofanira kutsiviwa sekushandiswa, zvikasadaro muviri unongopera. Chikafu chinoshandiswa nekuda kweichi chinogadzirwa nezvatinodya, zvinwiwa, kufema, nekunhuhwirira, kunzwa, kuona, uye kufunga. Kana chikafu chichitorwa mumuviri chinopfuura ichipinda murukova-rwizi, ihwo hupenyu hwomuviri. Zvese izvo zvinogona kutorwa neyehupenyu-rwizi uye ndokuisirwa neropa mumatehwe, kana pese panodiwa. Chimwe chezvishamiso chikuru chesekuita kwemuviri ndezvekuti mushure mekufungidzirwa kwekudya-zvinhu, zvimisikidzwa zvakavakirwa mumasero izvo, sezvese, zvinorongedzwa zvinoenderana nemhando yemitezo uye mitezo yemuviri. Zvinoitika sei kuti muviri unorarama uye uchikura muviri ugare usingachinjiki chimiro kune hwese hupenyu hupenyu, kunze kwekunge icho chinhu chinoshandiswa mukuvakwa kacho chakaumbwa uye chakachengetwa sekuwirirana nenzira kwayo.
Sezvo rwizi-rwizi rwuri mumuviri medu runochengeta zvese zvarwo zvichitenderera nokudaro kunoyerera rwizi rwehupenyu kuburikidza nemuviri wepadenga rinochengeta zvese zvaro zvichiramba zvichitenderera. Iyo inoderedza inoonekwa mune isingaoneki uye inyungudze zvakare zvisingaonekwe mukuonekwa kuti imwe neimwe mitezo ingashande mberi uye zvichikwira mukukwana kuburikidza nechimiro.
Isu tinoona zvisingaverengeke mafomu akatikomberedza, asi isu hatowanzo bvunza kuti izvo zvinhu zvemukati zvinofunga sei mafomu atinovaona ivo; kana chimiro uye chakakomba chakafanana; chimiro ndechipi; kana nei fomu rakapihwa rirambe richirimo mumarudzi mamwe chete?
Chikamu chegirazi hachigone kuve chimiro, zvikasadaro chingachinja saizvozvo; kana ikachinja yaisachinja kuva chimiro chaicho. Chimiro hachigone kuve icho chakakomba kana kuti chingave chinoshanduka sezvinhu, nepo, isu tichiona kuti muviri wese unochengetedza chimiro chazvo, zvisinei nekushandurwa kwezvinhu nguva dzose kuchengetedza muviri muchimiro. Isu tinoona chakakomba, uye isu tiri kuona chimiro mairi. Kana tichiona chikanganiso chose, uye tikachiona muchimiro, uye hombe yacho isiriyo fomu, kana fomu racho rakakura, saka hatisi kuona fomu racho kunze kwenyaya yacho. Chimiro, ipapo, kunyange chisingaonekwe pachako, chinouya mukuonekwa chete nerubatsiro rwechinhu, asi, panguva imwechete, chinoita kuti chinhu chioneke, uye kuburikidza nekuonekwa, kuratidza kukura kwaro muumambo hwakaderera; kushanda semota yekudzidziswa kwepfungwa; uye nekudaro nekushandira kubatsira yake pachayo nekubatana nepfungwa.
Maitiro emhando dzatinoona ndiwo akawanda kana mashoma emakopi echokwadi eanoratral kuratidzwa kwemafomu akakodzera. Hupenyu hunovaka zvichienderana nekugadzirwa kweye fomu astral uye nekufamba kwenguva iyo fomu inovonekwa mune yedu nyika.
Mafomu ipfungwa dzakarara. Kristaro, gondo, kana nyika, imwe neimwe inouya mukuonekwa kuburikidza nechimiro, iko kwakanzwika kufunga. Pfungwa dzehupenyu hwese dzinozvimba kuita mushure mekufa uye nekupa mhodzi iyo, kana nguva yakakwana yasvika, yakavezwa hunhu hutsva.
Chinhu, chiumbwa, uye ruvara, ndizvo zvitatu zvakakosha kuti zviumbike. Chinhu ndiwo muviri wechimiro, funga kumuganho uye muganho, uye penda chimiro chake. Pasi pemamiriro ezvinhu akakodzera mafomu anotarisana nekufamba kwehupenyu, uye hupenyu zvishoma nezvishoma huzvivaka pachavo muchimiro uye hunowoneka.
Mafomu haavipo nechinangwa chekusunga uye kubiridzira pfungwa, kunyangwe mafomu anoita uye anobira pfungwa. Iyoyo ndiyo pfungwa pachayo inozvinyengerera uye ichizvibvumira kuti inyengedze nechimiro, uye pfungwa dzinofanira kuramba dzichinyengera kusvikira dzaona mafomu uye nechinangwa chemafomu.
Chinangwa chechimiro ndechokubatira sebindu, murabhoritari, kuti kungwara kunogara mukati kushande mukati .Kukoshesa fomu nekukosha kwayo chaiko, uye chikamu icho chaari kutora mukushanduka kwenheyo dzakangwara dzatinotaura nezve pfungwa, isu tinofanira kuziva kuti kune mairi maNzira: iyo Nzira yeFomu uye iyo Nzira yekuziva. Iyi ndiyo nzira chete. Mumwe chete ndiye anogona kusarudzwa. Hapana munhu anogona kufamba zvese zviri zviviri. Zvese zvinofanirwa kusarudza nenguva, hapana anogona kuramba. Sarudzo iyi yakasikwa sekukura. Iyo inosarudzwa nechinokonzeresa chinangwa chehupenyu. Iyo nzira yakasarudzwa, mufambi anonamata sezvaanofamba. Iyo nzira yemafomu inotungamira kumusoro uye kumusoro, kune kukwirira kwesimba nekubwinya, asi magumo ndiro rima rekutsakatiswa, nekuti mafomu ese anodzokera mune chinhu chisina kunaka. Kubva pane yekutanga shungu yekuda kuva kana kuve chimwe chimiro, kune chishuvo chekuve nacho kana kubiwa nechimiro; kubva kuchivengwa chekonkiri chenyama, kusvika pakakodzera kunamatwa kwamwari. magumo enzira yemafomu yakafanana kune vese: kutsakatiswa kwehunyanzvi. Iyo hombe fomu inobata zvidiki, dzive fomu dzenyama kana dzekunamata, uye yekunamata inokurumidza maitiro. Mafomu ekongiri anonamatwa nepfungwa dzevanhu anopa nzvimbo yekunamatwa kwemafomu akakodzera. Vanamwari vadiki vacho vano chengetwa nevamwari vakakura uye ava vanogarwa namwari mukuru, asi vamwari uye mwari wavamwari, panofanira kuvapo zvinhu zvisipo, vagadziriswe kuva chinhu chisina kunaka.
Chishuvo, chishuvo, uye hupfumi, zvinotungamira kuburikidza nenyika uye zviitiko zvepasirese. Izvo zvimiro zvepasirese zvisingafungidzike zvemafomendi ekongiri. Zvimiro zvevanhu, zvehurumende, zvekereke, ndezvechokwadi kune pfungwa uye vane mafomu avo akakodzera sezvazvakaita mafomu aripo anovakwa napaimba dzehumambo, machedhi, kana vanhu vakavakirwa.
Asi mafomu ekongiri, uye tsika dzenzanga, hurumende, uye zvitendwa, hazvisi zvakaipa kuti zviparadzwe. Fomu yakakosha, asi chete mukuenzana nedanho iro rinobatsira mukunzwisisa kweConccious. Sezvo bedzi inobatsira kufambira mberi kune kuziva kwakakosha chaizvo.
Iyo nzira yekuziva inotanga nekuvapo kwekuziva kwekuziva. Inoenderera uye ichienderera nekunzwisisa uku, uye mukugadzirisa mafomu ese uye pfungwa mukuziva. Izvi zvinotungamira mukubatana, inova seinoreva pakati penyika yemafomu. Kana munhu anogona kuramba akatsiga, asingatyi, uye pasina kunetseka mukati meye-ness chete, pane chakavanzika ichi: iyo pfungwa yega-ness inowedzera uye inova iyo-yega-yega yeConcciousness.
Kupinda murukova rwehupenyu hwenyika, ichizviputira mune yakakura uye yakaomesesa zvinhu, kunyura mukati memanzwiro uye kudhakwa mukukanganwa nemanzwiro, pfungwa dzakakomberedzwa, dzakabirirwa mukati, dzakasungwa uye dzakabata musungwa ne fomu. Manzwiro, manzwiro, uye mafomu, zvinhu zvepfungwa - ivo musiki chaiye - asi vasingakwanise kutonga vatongi vavanhu, vakatapa, uye vakatapa mambo wavo. Kuburikidza nechimiro pfungwa dzakakura kuva dzinoita senge zvinhu chaizvo, vakagadzira nezvepfungwa dzisingaonekwe tambo dzemanzwiro akasimba pane zvisungo zvesimbi, asi zvakashongedzwa zvakadaro zvakavezwa kuti zvinoratidzika kufanana nezvose zvinodikanwa muhupenyu, kuhupenyu pachahwo .
Chimiro ikozvino ndiMwari. vapirisita vayo vakanyanya pfungwa nemanzwiro; Pfungwa inyaya yavo, kunyangwe zvakadaro vachiri ivo musiki. Fomu ndiMwari webhizinesi, nzanga, uye nyika; yehunyanzvi, sainzi, mabhuku, uye chechi.
Ndiani ungarega kuramba akatendeka kuna Mwari? Ndiani anoziva uye anokara uye kuda, anogona kuendesa mwari wenhema, uye anoshandisa iyo kuvuka magumo; bvisa akasungwa; tora nhaka yake youmwari; uye tanga iyo nzira inoendesa ku-All-one-ness yeConsciousness.